Weerara dhibee koroonaa too’achuuf jecha uggurri masjiida kabajamaa Makkah keessatti labsamee ture ka’e - NuuralHudaa
Mootummaan Sa’uudii weerara dhibee koroonaa hordofuun tatamsa’iina vaayirasichaa to’achuuf jecha, masjiidota kabajamoo keessatti qajeelfamaa fi uggura garagaraa kaahee turuun ni beekama. Alhada har’aa irraa eegalee garuu Masjiida kabajamaa Makkaah keessatti sochiin hundinuu guutumaan guututti akka duraatti deebi’uun beekamee jira.
Mootummaan Sa’uudii ibsa baaseen “haaldureewwan yeroo waggaa tokkoo oliitiif Masjiida Kabajamaa keessatti labsamanii turan hundi ka’uu isaaniitiin, Harama keessatti tajaajilli hundinuu guututti kennamuu jalqabamee jira” jedhe. Haaluma kanaan Masjiidal Haram keessatti mallattoon yeroo salaataa akka namni walitti siqee hin dhaabbanneef kaahamee ture kan ka’e yoo tahu, ummanni kumaatamaan lakkaahamus akka duraatti Masjiida guutuudhaan salaataa fi xawaafa raawwataa akka oolan Aljaziiraan gabaase.
Haata’u malee namoonni gara Haramaa seenan hundi, talaallii guutuu fudhachuu fi Masjiida keessatti haguuggii afaanii uffachuun dirqama tahuu qondaaltonni fayyaa biyyattii beeksisan.
mashaa Allh says:
xuubaa Musaa says:
Hussain Abduselam says:
masha alha masha alha allahu akbar alhamdulilah
mashallh tabarallh baggumaa rabbiin kenyaa rahamataa nuu godhee allhamadullh rabiili alaminii
Asalama Aleyikum worahmatulahi wobarakatuu Allahamdulillaa yaa Rabbi suma Allahamdulillaa
gurii kesan kahiri hadhagahu Rabbin nama dhaqe itti hirmatu nuhatasisuu insha Allah
musbah Awel says:
As wr wb akkam jirtuu fayyuumaa yaa ordoftota nuralhudaa jirenyii badhadhaa mash Allah
Duran dursee barabin isin tiksee hadhaan isin gaheen amaas rabbin balaa dhufuu jiruu kaa dhuufee jiruraa isin haa tiskuu mash Allah sagantaa keessan hordofuf haraa garaa woggaa tokkofaaf turuu kootti garuu takka yadaas gafis eratti ihrmadhee hin bekkuu
Sababin isas bekkumsumaa hin qabanuu hadhaa wattani garaa keessan imaleef
Tokkofaaf rabbin bekkumaa ilmii Qurana sif haa kenuu jetani duwayyin akka naa gargartanuu barbadaa
Lammaf formulaa keessan kan Qurana barsisuraa nagalchuu kerssanin barbadaa
Yoo rabbin koo sababaa isin godhee naa barsifatee hin bekkuu
Lakkofsaa bilbilaa koo 0922776200
MusbahAwel Sudan irraa
Rabbin jernyaa qanani isin haa jirachisuu
December 2, 2021 sa;aa 12:17 am Update tahe